फ्याट ग्राहक कसरी लेख्ने? मोटा ग्राहक भनेको के हो यसको अर्थ के हो? Tdk - कसरी लेख्ने।इन्फो
कसरी फ्याट ग्राहक लेख्न
तेल ग्राहक सही हिज्जे
दुर्भाग्यवस, तपाईले शब्दकोशमा केहि शब्दहरू फेला पार्न सक्नुहुन्न किनकि शब्दकोशले केहि शब्दहरू निश्चित अर्थहरूको साथ प्रस्तुत गर्दछ। हामीले अब यी शब्दकोषहरू सार्‍यौं, जहाँ तपाईं सीमित संख्याका शब्दहरू पाउन सक्नुहुनेछ, कुनै सीमितता बिना इन्टरनेटमा। शब्दकोश एक पटक छापिन्छ र कुनै थप वा हटाउन मिल्दैन, तर अनलाइन प्लेटफर्महरू जस्तै हाम्रो साइट लगातार अपडेट राखिन्छ। हाम्रो आगन्तुकहरूले यसमा धेरै योगदान गर्छन्।
विद्यार्थीहरू र वयस्कहरूले समेत गरेका गल्तीहरू एक नजिकको र अलग शब्दहरू छन्। उदाहरण को लागी, भित्री र बाहिरका शब्द कडाईले अलग लेख्नु पर्छ। उदाहरण को रूप मा (वीकडेज) एक भित्री शब्द हो र अलग लेख्नु पर्छ। अर्को उदाहरण दिनको लागि, शब्द (मिति सकिएको) बाह्य शब्द हो र अलग लेख्नुपर्दछ। लेख लेख्नु अघि हिज्जे गाईडबाट मद्दत लिई हामीलाई त्यस्ता गल्ती गर्नबाट रोक्छ।
केहि शब्दहरू प्रत्यय शब्द हुन्। कुनै मानिस जसलाई शब्दहरू थाहा छ; स्वर - व्यञ्जन ड्रपिंग - व्यंजन समानता (सख्त) अक्षरहरु को कारण p, ç, t, k र सबै भाषा प्रेमी जसले उत्पादन प्रत्ययमा महारत हासिल गरेका छन् हिज्जे गल्तीप्रति संवेदनशील छन्। सही र शब्दहरूको नियमित प्रयोग; वास्तवमा यो अवस्थालाई प्रोत्साहित गर्न संसारका सबै भाषाहरूका लागि यो आवश्यक छ। शब्दहरूको श्रेष्ठता निस्सन्देह तथ्य हो, तर यी शब्दहरू कत्ति राम्ररी लेखिएका छन् र हिज्जे गाईडको अनुरूप हो यो अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।
पुरानो समयमा, मानिसहरूले चट्टानहरूको बारेमा केही चित्रहरू तान्यो र अर्को व्यक्तिलाई वा पछि त्यहाँ आउने मानिसहरूलाई केही व्याख्या गर्ने कोशिस गरे। आज हामी एक सन्देश ई-मेल मार्फत संसारको अर्को भागमा व्यक्तिलाई पठाउन सक्दछौं। कम्तिमा हामी चट्टानमा केहि चीज तान्न र हाम्रो पछि आउने मानिसहरूलाई केही कुरा बुझाउने कोशिस गरिरहेका छैनौं। प्रविधिको मूल्य जान्नु आवश्यक छ।
फ्याट ग्राहकको मतलब के हो?
फ्याट ग्राहक कसरी लेख्ने?
तेल ग्राहक हिज्जे मार्गदर्शन
पेनकेक जस्तै फ्लैट
पृथक टेप, थियो